खेलकुद – yuwa Awaj
Jun152021 by Puja SharmaNo Comments
बराबरीमा रोकिए पनि स्पेनले बनायो रेकर्ड
युरो २०२० मा पूर्व विजेता स्पेनले सुखद् सुरूवात गर्न सकेन।मंगलबार विहान सकिएको खेलमा स्पेनलाई स्विडेनले गोलरहित बराबरीमा रोक्यो। तर खेल अवधिभर स्पेनले बलमा पकड जमायो। स्पेनले ८५ प्रतिशत बल आफ्नो पक्षमा राखेको थियो। तथ्याङ्क संकलन गर्ने संस्था ओप्टाका अनुसार युरोमा ८५ प्रतिशत बल आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने स्पेन पहिलो टिम हो। ओप्टाले सन् १९८० देखि तथ्याङ्क संकलन गर्दै आएको छ। स्पेनले पहिलो हाफमा ४१९ पास खेलेका थियो। जुन युरोको पहिलो ४५ मिनेटमा गरिएको सर्वाधिक पास हो।जबकी स्विडेनले केवल ३८ पास मात्र गरेको थियो। युरोमा कुनै पनि टिमले गरेको यो सबैभन्दा कम पास हो। खेल अवधिभर स्पेनले ९१७ पास गरेको थियो। यो पनि युरोमा कुनै पनि टिमले खेलेको सबैभन्दा बढी पास हो।यसअघि सर्वाधिक पासको कीर्तिमान स्पेनकै नाममा थियो।स्पेनले २०१२ को युरो कपमा आयरल्यान्डविरुद्ध ८५९ पास खेलेको थियो। त्यतिबेला स्पेनका
अर्जेन्टिना चिलीसँग बराबरीमा रोकियो
एजेन्सी । कोपा अमेरिका २०२१ मा अर्जेन्टिना चिलीसँग बराबरीमा रोकिएको छ । मंगलबार बिहान सकिएको खेलमा अर्जेन्टिना चिलीसँग १-१ को बराबरीमा रोकिएको हो । अर्जेन्टिनालको लागि कप्ता लियोनेल मेस्सीले गोल गरे भने चिलीका लागि एडुआर्डो भार्गासले गोल गरेका थिए ।अर्जेन्टिनाले अग्रता लिएपनि जोगाउन सकेन । खेलको ३३ औं मिनेटमा मेस्सीको फ्रिकिकमा गोल गर्दै अर्जेन्टिनालाई अग्रता दिलाएका थिए । झन्डै २० यार्ड टाढाबाट मेस्सीले गरेको फ्रिकिक प्रहार गोलरक्षक क्लाउडियो ब्राभोले रोक्न सकेनन् ।अर्जेन्टिनाले पहिलो हाफमा लिएको अग्रता दोस्रो हाफमा भने जोगाउन सकेन । ५७ औं मिनेटमा चिली खेल बराबरी गर्यो । पेनाल्टी क्षेत्रभित्र निकोलस टाग्लियाफिकोले आर्टुरो भिडाललाई लडाएपछि रेफ्रीले पेनाल्टी दिएका थिए ।भिडाल आफैंले गरेको पेनाल्टीलाई अर्जेन्टिनी गोलरक्षक एमिलियानो मार्टिनेजले विफल पारेपनि रिबाउन्डमा एडुआर्डो भ
Mar172021 by Yuwa AawajNo Comments
बधाई ! सन्दिपले बनाए गजबको रेकर्ड ! सबै बलरलाई पछि पार्दै बने आईपिएलकै नम्बर १ बलर ।
काठमाडौं : इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट(आईपीएल’ को जारी संस्करणमा २ खेल मात्रै खेलेका नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले सनसनी मच्चाएका छन् । दिल्लीले ११ ओटा खेलमा त सन्दीपलाई बेन्चमै राख्यो । १२ औँ खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंग्लोरसँग सन्दीपलाई मौका दियो दिल्लीले । आफ्नो डेब्यू खेलमै सन्दीपले पार्थिव पटेलको विकेट लिए । उनले बेंग्लोरसँगको खेलमा ४ ओभर बलिङ गर्दै २५ रन दिए । पहिलो खेलमै थोरै रन दिएर एक विकेट लिएपछि विश्व प्रख्यात क्रिकेटरदेखि विश्लेषकसम्मले सन्दीपको प्रशंसा गरे । इमरान ताहिरले के भने सन्दीपलाई, बिश्व भर मचियो हंगामा अझ शुक्रबार भएको चेन्नईविरुद्धको खेलमा विश्वकै उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान सुरेश रैना सन्दीपको बलमै आउट भएपछि उनको चर्चा एकाएक चुलिन पुगेको छ । सुरेश रैनाले सन्दीपको पहिलो बल नै फेस गर्न सकेनन् । सन्दीपले गुगली बल फ्ँयाक्दै रैनालाई विजय शंकरबाट क्याच आउट गराउन स
Dec282020 by Yuwa AawajNo Comments
काठमाडौं : ‘म नेपाली नै हुँ, म नेपालकै लागि खेल्छु।’ गौरिका सिंहले भावविह्वल भएर यस्तै यस्तै भनेकी थिइन, एक वर्ष अगाडि काठमाडौंमा १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) चलिरहेका बेला। यस्तो किन पो भन्नु परेको थियो होला त ? सार खिच्दा यसले नेपाली खेलकुदमा नयाँ मानक भने तयार हुन्छ। विदेशी भूमिमा प्रशिक्षण लिँदै, अभ्यास गर्दै कोही अब्बल हुन्छ र उसले नेपालको प्रतिष्ठा बढाउने काम गर्छ भने त्यसलाई स्वागत गर्न किन कन्ज्युस्याइँ ? कसैले तिनलाई कहाँ नेपाली होइन भन्न पाइन्छ र ? बरु उनले पाएको उपलब्धिमा खुसी भएर मन ठूलो पार्दा राम्रो। धन्य, गौरिकाले यस्तो फरक बाटो त खोलिदिएकी छन्। लन्डनमा बस्छिन्, पौडी खेल्छिन्, अनि नेपालको प्रतिधिनित्व गर्छिन्, त्यो पनि गौरवले। २०७६ मा नेपाली खेलकुदको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो अवसर केही हो भने त्यो १३औं साग नै हो। सागको सबैभन्दा ठूलो केही नेपाली उपलब्धि छ भने त्यो गौरिका
Nov212020 by Yuwa AawajNo Comments
यीनै हुन भलिबल खेलेर सबैको मन जितेकी राष्ट्रिय च्याम्पियन खेलाडी – सरस्वती चौधरी…हेर्नुहोस् ।
१३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको महिला भलिबल फाइनलमा भारतसँग पराजित भएपछि नेपाली खेलाडी कोर्टमै भक्कानिए। उपाधि जित्न सकेको भए सारा नेपाली खुसी हुन्थे।ु तत्यो खेल पछाडी नेपालमा खेल जगतमा भने निकै उत्साहा छायो । नेपालमा पनि खेल क्षेत्रमा निकै सम्भावना रहेछ भन्ने आवाजहरु पनि आए । त्यो खेलमा मन जित्ने नेपाली एक चेलीको नाम हो सरस्वती चौधरी । राष्ट्रिय टिमकी महत्वपूर्ण स्पाइकरको परिचय बनाएकी सरस्वतीलाई ६ कक्षा पढ्दासम्म खेलकुदमा चासो थिएन। भलिबलबारे त सुनेकै थिइनन्। उनले जवाफ दिईन पत्रकारको प्रश्नमा । धनगढीमा जन्मिएकी उनको उचाइ भने भलिबल खेल्न उपयुक्त थियो। १२ वर्षमै ५ फिट ७ इन्च अग्ली सरस्वतीलाई स्थानीय प्रशिक्षक विष्णु चौधरीले भलिबल खेल्न सुझाए। सरस्वतीलाई प्रशिक्षण दिनसके भविष्यमा राम्रो खेलाडी बन्ने विश्वास विष्णुको थियो। तिम्रो हाइट राम्रो छ। जिउ पनि खेलाडीकोजस्तै छ। अभ्यास गर्
असार ७ पछि ‘स्मार्ट लकडाउन’ गरिने (1293)
२.	असार ७ पछि ‘स्मार्ट लकडाउन’ गरिने (1293)